Gaas” Somaliland waxay abuurayaan taariikh been ah, waxna kasoo bixi maayaan wada hadalada…” (dhegayso) – Radio Daljir
Luulyo 21, 2018 11:28 b 0
Madaxwaynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inuu jiro taariikh aan jirin oo ay been abuurayaan Somaliland, taasi oo lagu doonayo in caalamka lagu jahwareeriyo.
Gaas ayaa khudbad uu ujeediyay jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaana reer Puntland ee Biljamka iyo Sweden ayaa waxaa uu sheegay maamulka Somaliland inuu yahay qabiil gaar ah oo dega Hargaysa iyo Burco, islamar ahaantaana la siiyay waxyaabo aysan xaq u lahayn.
Madaxwayne Gaas ayaa ku dhaliilay iyadoo shacabka gobolada Sool iyo Sanaag ay kasoo horjeedaan kala go’a umadda Soomaaliyeed inay la fariisato dad caburin ku haya dadkii isku hayay midnimada dalka, ee ay ka mid yihiin dadka calanka Soomaaliya ku dibadbaxayay ee magaalada Laascnood ee Somaliland xabsiga dhigtay.
“Gabadha calanka baluugga babinayso ee leh Soomaali baan nahay looma jawaabayo, waxaan aaminsanahay wax la yiraahdo Somaliland majirto, sababtoo ah 1960kii calankii la taagay Hargaysa ee gobanimada ma’ahayn calan aan ahayn kii baluuga ee Maxamed Cawaalle Liibaan” ayuu yiri Gaas.
Gaas ayaa dhanka kalle sheegay inay waxba soo kordhinayn wada hadalada dowladda faderaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland, oo uu sheegayo midkoodna uu go’aan lahayn, balse kaliya ay tahay wax been ah oo bulshada lagu maaweelinayo.